त्रिभुवन विमानस्थलमा सोमवार देखियो अनौठो दृष्य ! स्थानिय डराए ? वास्तविकता यस्तो रहेछ – Ramailo Sandesh
त्रिभुवन विमानस्थलमा सोमवार देखियो अनौठो दृष्य ! स्थानिय डराए ? वास्तविकता यस्तो रहेछ
तर यो कुनै विपद्को संकेत थिएन । अहिले निषेधाज्ञा भएका कारण विमानस्थल माथिको आकास खाली छ । विमानहरु उडेका छैनन् । यही मौकामा विमान कम्पनीले आफ्ना पाइलटहरुलाई जहाज उडाउने अभ्यास गराइरहेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रवन्धक प्रतापबाबु तिवारीका अनुसार पाइलटले हवाईजहाज उडाउने अभ्यास गरिरहेकाले यस्तो दृष्य देखिएको बताएका छन् ।
सोमबार बिहानैदेखि हिमालय एयरलाइन्सले आकाश खालि भएको मौकामा आफ्ना पाइलटलाई अभ्यास गराइरहेका कारण यस्तो दृष्य देखिएको उनले बताए । त्यही भएर हिमालय एयरलाइन्सको हवाईजहाज छिनमै उड्न र छिनमै बस्ने गरिरहेका छन् ।
हट्यो जोर-विजोर प्रणाली, सबै सार्वजनिक यातायात चल्ने?
भर्खरै आयो दुखद खबर: यी देश उड्न लागेका नेपालीहरु पनि रोकिने !